Xildhibaan Prof Dhalxa “Labada Gole ee Baarlamaanka waxaa laga helayaa xildhibaanno aan waligood xaadirin kullamada” – Kalfadhi
May 2, 2020 May 2, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaan Prof Maxamed Cumar Dhalxa, oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa xusay in la heli karo xildhibaanno iyo Senataro aan waligood xaadirin kullamada Baarlamaanka Soomaaliya.
Prof Dhalxa, ayaa sheegay in mudanayaashaasi qaarkood ay guddoomiyaal ka yihiin qaar kamid ah guddiya muhiimka ah ee Baarlamaanka.
“Waa in la is-weydiiyaa yaa iska leh mas’uuliyadaasi, baarlamaanka sharci ayaa yaalla, xildhibaanka haddii uu soo fariisan waayo kalfadhiyo cayiman in uu weynayo xilkiisa. Dadkii shalay isaga soo doortayna ay keensan karaan qof ay ku bedeshaan, laakiin fursadaasi yaa siinaya?”.
Xeel-dherayaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa aaminsan in ay jiraan xildhibaanno muddo ka badan sannad ku maqan fasaxyo kuwaas oo qaarkood laga yaabo in ay dalka joogaan ama ganacsiyo gaar ah ay maamulaan.
Xeer-hoosaadka Baarlamaanka ayaa dhigaya in mudanaha uu xasaanadiisa weyn karo haddii kulamo cayiman uu ka maqnaado fadhiyada Baarlamaanka.
Fadhigii 17-aad ee kalfadhiga 5-aad Golaha shacabka ayaa u baaqday Kooram la’aan waxaana soo xaadiray 98 mudane. Kulankaasi ayaana kamid ahaa kullamadii ugu dambeeyay ee u baaqday kooram la’aan.